वाम गठबन्धनले मलाई झनै सजिलो बनायो :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
वाम गठबन्धनले मलाई झनै सजिलो बनायो
राजेन्द्र केसी, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार, काठमाडौं–१०
० चुनाव प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ?
– चुनावको तयारी एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ । अहिले पनि म घरदैलोमै छु । अहिले (शनिबार) म छैमलेको भण्डारखर्क भन्ने ठाउँमा छु । यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग भेट गरिरहेको छु ।
० स्थानीयवासीको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ ?
– जनताको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो छ । यहाँका जनता मंसिर २१ गते पर्खिरहेका छन् । कहिले मंसिर २१ आउला र नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउँला भनेर आतुर भएका छन् ।
० उनीहरूको माग कस्ता कस्ता छन् ?
– यहाँका जनताको माग त्यति ठूला छैनन् । सडक, पानीको समस्या उनीहरूले उठाउने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन्, जुन मैले निरन्तर गरिरहेको छु । त्यही अभियानमा म लागेको छु । यो कुरा यहाँका जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ ।
० तपाईको चुनावी एजेन्डा के के छन् ?
– समृद्ध मुलुक बनाउने हाम्रो एजेन्डा हो । कांग्रेस नेतृत्वमै मुलुकमा शान्ति ल्यायौ, संविधान बनायौं । अब हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौ । यहाँको बरोजगार युवालाई रोजगार दिने हाम्रो एजेन्डा हो । देशको आर्थिक विकास दु्रत गतिले अघि बढाउने हाम्रो मुद्दा हुन् ।
० काठमाडौं १० मा तपाईका पनि छुट्टै एजेन्डा होलान् नि ? के के प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ?
– समृद्ध राष्ट्र बनाउने मेरो पनि एजेन्डा हो । मेरो कुनै व्यक्तिगत एजेन्डा छैन । पार्टीको एजेन्डा मेरो एजेन्डा हो । हाम्रो पार्टीले जेष्ठ नागरिकलाई पाँच हजार बृद्धभत्ता दिन्छौं भनेको छ । बेरोजगार युवालाई समुदायमा आधारित काममा लगाएर बेरोजगार भत्ता दिने कुरा गरेको छ । पार्टीले सारेका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न म अघि बढ्ने छु ।
० अघिल्लो पटक तपाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हराएर निकै चर्चामा आउनुभएको थियो । अहिले फेरि चुनाव जित्ने विश्वास छ ?
– हो, यसपटक पनि मैले नै चुनाव जित्छु । सतप्रतिशत मैले जित्छु । यसमा कुनै शंका छैन ।
० अहिले एमाले र माओवादी मिलेका छन्, वाम गठबन्धनले तपाईलाई फरक पर्छ कि पर्दैन ?
– उनीहरूको वाम हो । मेरो काम हो । नेपाली कांग्रेसले काम गर्छ । उनीहरूले कुरा गर्छन् । फरक त्यही हो । वाम र काममा जनताले कामलाई भोट दिन्छन् । उनीहरूको गठबन्धनले मलाई केही फरक पर्दैन । गठबन्धन नभएको भए बरु एमाले बलियो हुन्थ्यो । गठबन्धनले त मलाई झनै सजिलो बनाएको छ ।
० तपाईको प्रतिस्पर्धा फेरि माओवादीसँग हुँदैछ नि ?
– हो, बाहिरबाट आएकाले मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जित्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
० एमालेको भोट तपाईलाई आउँछ कि आउँदैन ?
– एमालेको मात्रै होइन, सारा जनताको भोट मलाई आउँछ ।
० काठमाडौं १० मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारसँग एमालेका मान्छे सन्तुष्ट छैनन् त ?
– उनीहरूको कुरा मलाई थाहा छैन, तर मलाई दुवैतर्फको भोट आउँछ ।
० यसपटक कति जति भोटको अन्तर होला ?
– १५ हजार मत अन्तरमा मैले जित्छु । पहिले दस हजारको मत अन्तरले जितेको थिएँ ।
० पहिलेको भन्दा अहिले कांग्रेसको संगठन झनै सुधार भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
– चार वर्ष काम गरेको छु । चार वर्ष काम गरेपछि सुधार हुँदैन त ? चार वर्ष सांसद भइसकेको मान्छेको निर्वाचन क्षेत्रमा सुधार नभए कहिले हुन्छ त ?
० यसबीचमा तपाईले के के काम गर्नुभयो ?
– एक हजारवटा काम गरेको छु । कुन कुन काम गरेको भन्ने ?
० ठूल्ठूला काम के के गर्नुभयो, भन्नु होस् न ?
– मुख्य काम भन्नुपर्दा, दक्षिणकाली नगरपालिकाको फर्पिङमा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण भएको छ । त्यहाँको संस्कृति बाजागाजा, नेवार समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षण भएको छ । साथै गाउँगाउँमा ढुंगा छाप्ने काम भएको छ । मठमन्दिरको सुधार भएको छ । पोखरीहरूको जीर्णोद्धार भएको छ । फर्पिङलाई मनोरम बनाइएको छ । थानकोट र कीर्तिपुरमा पनि यस्तै काम भएको छ । थानकोटको विश्वदेवीदेखि धाक्छीसम्म बाटो बनाएको छु । बाणभञ्ज्याङमा डिपबोरिङ गरी खानेपानी आयोजना बनाएको छु । त्यहाँको स्कुल हाताभित्र खेल मैदान बनाएको छु । मातातीर्थमा दस करोडको बृहत् खानोपानी योजना सञ्चालन भएको छ । कीर्तिपुरमा वैकल्पिक मार्गहरू खुलेका छन् । नेवार समुदायको सम्पदाहरूको संरक्षण गरेको छु ।
० तपाईको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ ?
– मैले त प्रतिस्पर्धी नै देखेको छैन । वाम उम्मेदवार नै दोस्रो दल होला ।
Tarun Khabar0response सोमबार,११ मंशिर २०७४ 474 Views
प्रचण्ड र कमल थापा उस्तैै चरित्रका हुन्
सोमबार,१८ मंशिर २०७४
मधेसको भोट एमालेलाई जाँदैन
माओवादी चुनावपछि कांग्रेससँग मिल्न आउँछ
सोमबार,११ मंशिर २०७४